Safiirka UK u fadhiya Soomaaliya oo Axmad Madoobe kala hadlay arrimaha doorashada Jubbaland – Somali Top News
Somalia tightens aviation measures to curb COVID-19
Senator Dhageey oo ilaaladiis ku wareejiyay laamaha amniga kadib dil ay geysteen
Puntland oo karantiileysa Shan ruux oo Coronovirus looga shakiyay
Somalia announces third confirmed Covid-19 case
Shabaab leaders split over funds control
Safiirka UK u fadhiya Soomaaliya oo Axmad Madoobe kala hadlay arrimaha doorashada Jubbaland
May 18, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG ah ee Jubbaland ku qaabilay Safiirka Dowlada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Fender.
Labada Masuul ayaa ka wada hadlay xaalada Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan iyadoo gaba gabadii ay Saxaafada ku hadleen Magaalada Kismaayo.
Danjire Ben Fender ayaa sheegay in Madaxweynaha ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab iyo sidii la isaga kaashan lahaa dardar galinta adeegyada mucaawinada iyo kuwa kale ee ay UK ku tageerto Soomaaliya waxaa uu intaas ku daray in ay ka wada hadleen Arimaha Abaaraha iyo xiliyadii roobka ee daahay oo dadka ree Jubbaland saamayn ku yeeshay.
Safiirku wuxuu sheegay in uu rajaynayo in abaaraha deegaanada qaar ka jira ay dadku kasoo kaban doonan.
Danjirahu Ingiriiska wuxuu sheegay in ay rajaynayaan in Doorashada Jubbaland ay ku dhacdo si nabadgalyo ah oo xor iyo xalaal ah kana fog fara galin dhinac walba leh.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in Safiirka ay isla soo qaadeen shirkii Garowe iyo waxyaabahii la isku mari waayay dhaliilaha ay arkaana uu la wadaagay
Waxaa uu intaas ku daray dagaalka Al-Shabaab iyo sidii iskaashi buuxa looga yeelan lahaa iyo gurmadka dadka ay abaarahu saameeyeen.
waxaa kale oo Madaxweynahu uu sheegay in ay Dowlada Federaalku abaabul lagu khalkhal galinayo nabadgalyada ay Xamar kasoo abaabulayso kuwaas oo ay Jubbaland ka fulinayaan shaqsiyaad lacago lagu soo siiyay Bulshada Caalamka iyo Safiirkana ay la wadaageen Khatarta ay nabadgalyada ku keeni karto masuuliyadeedana arintaas ay qaadayso Dowlada Federaalka ah sida uu sheegay Madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam.
Jubaland ayaa uragta in Dowlada Soomaaliya ay Fara galin ku hayso arimaheeda doorashada, xila dhawaan la filayo in deegaanada Maamulkaasi ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Jubaland.
← UPDF troops undergo post mission counselling, guidance after one year in Somalia
Wasiirada Amniga iyo Waxbarashada Soomaaliya oo ka dagay magaalada Jowhar →
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukuntay Askari shacabka dhaca
October 8, 2018 Somali Top News 0
Turkiga iyo Mareykanka oo ku dhawaaqay iney qaadaan cunuqabateyntii ay isku soo rageen
November 4, 2018 Somali Top News 0
Koox hubeysan oo caawa weerar ku dishay hal qoys
April 17, 2019 Somali Top News 0